एचआईभी संक्रमित बालबालिकाका लागि सिटिजन्सको सहयोग- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
एनआईसी एसिया बैंक रुपन्देहीको कोटीहवामा
काठमाडौँ — रुपन्देहीको कोटीहवा एनआईसी एसीया बैंकको नयाँ शाखा स्थापना गरिएको छ । तिलोत्तमा न.पा. -१५, कोटिहवामा गत सोमबार एक समारोहबीच नेपाल राष्ट्र बैंक, भैरहवाका निर्देशक अशोककुमार पौडेलले शाखा उद्घाटन गरेका हुन् ।
कोटीहवा शाखासँगै एनआईसीको देशभर १ सय ७३ शाखा पुगेको सूचना अधिकारी रोशनकुमार न्यौपानेले जनाए ।
प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७४ १७:०१
अर्गानिक भनेर खाइने उत्पादन साँच्चिकै अर्गानिक होलान् त ?
भरतपुरले उर्वर कृषिभूमिमा प्लटिङ रोक्ने
मौज्दात सकियो, मल आएन
हजारौं क्विन्टल सेतकचिनी सड्दै, ऋणमा डुबेको व्यवसायीको गुनासो
ग्रामीणमा खुलेको सहकारीको वार्षिक आम्दानी करोड बढी